Mayelana NATHI - Umkhiqizi we-TC
I-TC ibhizinisi lobuchwepheshe lobuchwepheshe eligxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwesikrini sokubonisa se-LCD & OLED sefoni ephathekayo. Okwamanje ingomunye wabakhiqizi abakhulu besikrini sokubonisa emakethe yezesekeli zamaselula eChina.
I-TC inabasebenzi abangaphezu kuka-500 nezindawo ezingaphezu kwama-5,000 square metres workshop manje, zonke azinawo uthuli, ama-workshops angaguquki njalo futhi anomswakama, kufaka phakathi ama-workshops angaphezulu kuka-1,000 metres ayi-100. Le nkampani ineqembu eliqinile lobuchwepheshe nokuphatha, kufaka phakathi amalungu eqembu le-R & D angaphezu kwama-20, kukhona onjiniyela abangochwepheshe abangaphezu kwama-50 ekuqhubekeni, kwimishini nakwikhwalithi.
Le nkampani inezinhlamvu ezi-4 ze-COG, imigqa yokukhiqiza i-FOG, imigqa emi-5 yokufaka ulayini othomathikhi ngokuphelele, imigqa ye-4wlight yokuhlanganisa othomathikhi, kanye nokuthunyelwa okuphelele nyangazonke kwemikhiqizo yama-800K ama-PC, imishini yokuzenzekelayo ngokuphelele ingaqinisekisa ikhwalithi nokuvumelana kwemikhiqizo.
I-TC isebenzisa uhlelo oluqinile lokuphathwa kwekhwalithi, iwine ukwethenjwa nokudunyiswa okuvela kumakhasimende ngobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu nensizakalo yobungcweti, futhi isungule ubudlelwano obuhle besikhathi eside bokusebenzisana nabakhiqizi abaningi abaziwayo basekhaya nabangaphandle. Ngokuhlolwa okuphindaphindwayo nokwenza kahle, imikhiqizo ye-TC ifinyelele ezingeni elihola phambili embonini ekukhanyeni okukhanyayo, umbala we-gamut, ukusuthisa, i-angle yokubuka nezinye izinkomba.
I-TC inamathela kwisisekelo "senkonzo esezingeni eliphakeme yamakhasimende, imikhiqizo evelele ebuyisela amakhasimende", kanye nomgomo "wokukusebenzela ngenhliziyo yonke, ngobungcweti nangokuzinikela", sizibophezele ekwakheni umkhiqizo we-TC, futhi Izinsizakalo ze-VIP zamalungelo wokufaka amathegi kuwo wonke amakhasimende, ezinamakhono wokuxazulula ibhizinisi avuthiwe, nokugcina idumela elihle embonini efanayo.
Abakwa-TC bakwamukela ngokufudumele ukuvakashelwa kwakho nokuholwa kwakho, futhi banethemba lokusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside nawe. Ngabe usakhathazekile ngekhwalithi yomkhiqizo? Ngabe usatatazela ngokuthengisa ngemuva komkhiqizo? Sicela ushiye inkinga yakho kithi. Inkampani ikubheke ngabomvu ukuvakashelwa kwakho, futhi yamukela ukubonisana kwakho nokusekelwa. Uma ulindele ukukhetha iqembu lobuchwepheshe, insizakalo esezingeni eliphakeme, imikhiqizo esezingeni lokuqala, ulindeni, sicela uxhumane nathi! Ngiyabonga!